प्रिमियर रूले हीरा संस्करण | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
प्रिमियर रूले हीरा संस्करण बाट उत्कृष्ट खेल प्ले को एक एक गोल लागि बन्द सामना. यो साँच्चै आफ्नो तेज सुविधाहरू स्पष्ट कट हीरा छ. उज्यालो र असाध्यै डिजाइन एक क्यासिनो खेल को यो मणि सबै समय मनपर्ने को क्यासिनो सूची मा उच्च स्तर छ.
Microgaming अप 2D र 3D सुविधाहरू दुवै मिश्रण एक सौन्दर्य मा सचेत देख परम्परागत Roulette छानिएको र यसलाई परिवर्तन गरेको छ. खैर ध्वनि प्रभाव द्वारा समर्थित यसलाई डिजाइन र एनिमेशन लागि पट्टी उठ्छ.
प्रिमियर रूले हीरा संस्करण विशेषताहरू
एक कुर्सी माथि पुल र क्यासिनो खेलको नेत्रहीन आश्चर्यजनक टुक्रा गरौं, को प्रिमियर रूले हीरा संस्करण मा तपाईं रील. अत्यधिक अनुकूलन भन्ने यसको असाध्यै डिजाइन लेआउट संग यसको लागि सबै खेलाडी नयाँ कुरा प्रयास गर्न चाहने एक उपचार छ. भन्ने एउटा सजिलो इन्टरफेस आफ्नो खेल को सबै विवरण देखाउँछ- शर्त इतिहास, रकम wagered.
तपाईं पनि टर्बो विकल्प वा स्वतःप्ले विकल्प खेल गति गर्न सक्छन्. एउटै तालिका रंग लेआउट को नरमाइलो, रातो यसलाई परिवर्तन, नीलो, आफ्नो खेल विविधता थप्न हरियो वा खैरो.
एक विशिष्ट युरोपेली रूले खेल, यो नै सट्टेबाजी नियम पालना. भित्र बाजी वा जहाँ बल को Roulette पाङ्ग्रा मा भूमि हुनेछ मा बाहिर बाजी ठाँउ. कुनै पनि खम्बा यो खेल देखि लिएर मा सम्भव छ 0.25 एक विशाल 1K चिप गर्न. यो व्यापक दायराभित्र, एक जीत उतरने को नहुनु उच्च हो.
विशेषज्ञ मोडमा खेल्ने अभ्यास र कौशल आवश्यक. यस्तो स्वतःप्ले रूपमा सुविधाहरू अधिकांश, तालिका रूपरेखा यस मोडमा उपलब्ध अनुकूलन छन्. तपाईं पनि कल बाजी वा Neighbour बाजी प्रयोग गरेर आफ्नो बाजी अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ. उच्च रोलर्स र नयाँ खेलाडी दुवैको लागि अनुकूल कि सजिलो इन्टरफेस प्ले, प्रिमियर रूले हीरा संस्करण मजा आयो प्रतीक्षामा रोमाञ्चकारी अनुभव छ. अचम्मको 3D ग्राफिक्स र अपार्टमेन्ट ध्वनि प्रभाव तपाईं एक रोलर कोस्टर सवारी लागि readies. यसलाई मोहक जीत थप्न र यसलाई सबै को लागि एक विजेता संयोजन छ. प्रिमियर रूले हीरा संस्करण नेत्रहीन शीर्ष वर्ग भन्ने एक पलिश अनलाइन खेल छ.
Online & मोबाइल रूले | प्रिमियर रूले £ 5…